Manara-dalàna aloha | NewsMada
“Hiova kosa amin’izay angamba ny tanàna”. “Tsy mora foana ny fampanarahan-dalàna, satria efa zatra gaboraraka”, “Tsy manana antom-pivelomana ankoatra an’io izahay, ka hangalatra izany?”, “Izao ve izany ny velirano, fanalana ny asanay mpivarotra?” Ampahany tamin’ireo fanehoan-kevitra marobe, izay nangonin’ny mpanao gazety teny rehetra teny, teto Antananarivo, tao anatin’ny roa andro io. Mahakasika indrindra ilay asa fandaminana nataon’ny polisy teto an-dRenivohitra, nanala ireo mpivarotra amorony sy anaty lalana.
Ny roa voalohany, mankasitraka ny fandraisana fepetra. Ny roa faharoa kosa, fanehoan-kevitr’ireo mpivarotra voakitikitika. Nosafidiana manokana mihitsy, nentina ato anatin’ny “Indraimbava” anio, hanehoana ilay adihevitra. Mazava loatra mantsy, fa tsy maintsy misy mandrirotra mankany amin’ny resa-politika, araka ny fironany avy ity tranga ity. Ireo mankasitraka, efa te hiova sy hiaina fandrosoana noho izao hita maso izao, ho an’ny tanànan’Antananarivo. Ny mpivarotra tsy ara-dalàna kosa, tsy maintsy haneho ny tsy fahafaliany satria tokoa voakitikitika ny fitadiavany.
Tsy ara-dalàna… Izay anefa no tokony ho zava-dehibe atao an-tsaina amin’ity resaka ity. Tsy ara-dalàna ny fivarotana anaty lalan’ny mpandeha an-tongotra, mainka anaty arabe. Tsy misy tsy mahalala izany, fa rehefa tsy misy mibedy moa, tsy hanao ny fanao ihany aloha? Rehefa tsy bedy sy tsy enjehina elaela ny tsy mpanara-dalàna, lasa mihevitra fa efa rariny sy hitsiny ny ataony.
Mpampanara-dalàna ny asan’ny mpitandro filaminana, ary izay no ataony. Tsy anjaran’izy ireo ny mijery ny ankoatra izay, eny na dia mety misy fianakaviany koa aza amin’ireo mpivarotra ireo. Efa mahavelom-bolo ary hirarian’ny mpampiasa lalana hitohy ny fanentanana sy ny fampanarahan-dalàna nataon’izy ireo teto an-dRenivohitra, ka ny mpandeha an-tongotra nampianarina hanana ny lalany, ny fiara sy ny moto ary ny bisikileta manana ny arabe, ny mpivarotra sy ny mpividy kosa manana ny tsena. Tsena ara-dalàna, izay inoana kosa anefa fa efa ao anatin’ny fepetra horaisin’ny mpitondra ny tanàna manaraka eo.